मोटोपनले तनावमा हुनुहुन्छ ? भुटेको चना खानुका यस्ता छन् अनेक फाइदाहरु – Nepal Trending
मोटोपनले तनावमा हुनुहुन्छ ? भुटेको चना खानुका यस्ता छन् अनेक फाइदाहरु
﻿काठमाडौं : चना हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक गेडागुडी हो । गेडागुडीमा भना धेरैलाई मान पर्छ । चना भुटेर खाँदा स्वादमा निकै मिठो हुन्छ । प्रशस्त प्रोटिन पाइने चना धेरैले बिहानमा खाँजाको रुपमा खाने गर्छन् । भुटेको चनाको सेवनले शरिरमा उर्जा दिने गर्छ ।
यसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्याल्सियम र आइरन पाइन्छ । यसको सेवनले पुरुषत्वमा बृद्धि गर्छ । यदि तपाई मोटोपनले हैरान हुनुहुन्छ भने दैनिक भुटेको चना खानु राम्रो हुन्छ । भुटेको चना सेवन गर्ने गरेमा रोगप्रतिरोधी क्षमतामा बृद्धि हुन्छ ।
मधुमेह रोगीका लागि यसको सेवन फाइदाजनक मानिन्छ । यसले पाचन शक्ति बढाउन सहयोग गर्छ । कब्जियतका रोगीहरुका लागी पनि भुटेको चना खानु राम्रो हुन्छ । पिसाब सम्बन्धि रोगबाट छुटकारा पाउन पनि भुटेको चना सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । यसको सेबनले हाम्रो शरीरको बोसो घटाउन सहयोग गर्छ ।
महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन? जानीराखौ
शनिबार जन्मेका मानिसको भाग्य र स्वभाव कस्तो हुन्छ ? जान्नुहोस्